महिलाहरु पुरुषलाई आफ्ना यी ५ कुरा यि कारणले गर्दा कहिल्यै बताउँदैनन् ! – Online Khabar 24
महिलाहरु पुरुषलाई आफ्ना यी ५ कुरा यि कारणले गर्दा कहिल्यै बताउँदैनन् !
भनिन्छ, महिला तथा केटीहरूको जीवनमा थुप्रै रहस्यहरू हुन्छन्। भिडियो,
महिलाहरूको जीवनलाई रहस्यको पर्यायवाची पनि भन्ने गरिन्छ । केटीहरूको मनमा के भइरहेको छ, त्यो पढ्न कठिन मात्रै होइन असम्भव नै हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ केटीहरूले आफ्नो पुरुष साथीबाट धेरै कुरा लुकाउँछन्।
अधिकांश महिलाहरू आफ्नो पति वा प्रेमीको अगाडि आफ्नो परिवारको छ’विबारे एकदमै सचेत हुन्छन् । आफ्ना दिदी बहिनी, आफ्नी आमा वा परिवारको छविसँग स’म्बन्धित सबै कुराबारे गो’प्य राख्न महिलाहरु पछि ह’ट्दैनन् । तथापि, एउटा तथ्य यो पनि हो कि महिलाहरू प्रायः बोलीमा काँ’चो हुन्छन् । साभार गरियको खबर ।
Prevशरीरमा आउने ‘कोठी’ के हो, कुन अंगको कोठीको के अर्थ ? हेर्नुस
nextघुम्न गएकाहरू फर्कन पाएनन् !